Detoronomy 34: 1-12 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 34, 1-12
Ny nahafatesan'i Moizy.
1Niakatra avy eo an-tany lemak'i Moaba Moizy, nankany an-tendrombohitra Nebao, ao an-tampon'i Fasgà, tandrifin'i Jerikao. 2Ary nasehon'ny Tompo azy avokoa ny tany rehetra dia Galaada hatrany Dana; Neftalì rehetra mbamin'ny tanin'i Efraima andrefana; 3Ny Negeba, ny faritanin'i Jordany, ny lohasahan'i Jerikao; dia ny tanànan'ny rofia, hatrany Segora. 4Dia hoy Iaveh taminy: Io no tany izay nianianako tamin'i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba hoe: Homeko ny taranakao izany. Nataoko nahita maso azy hianao, nefa tsy hiditra eny hianao.
5Teo no nahafatesan'i Moizy, mpanompon'ny Tompo, dia teo amin'ny tanin'i Moaba, araka ny didin'ny Tompo. 6Ary naleviny teo an-dohasaha, amin'ny tanin'i Moaba, tandrifin'i Bet-Fogora izy. Ary tsy misy olona mahalala ny fasany mandraka androany. 7Efa roapolo amby zato taona Moizy no maty, nefa ny fahiratany tsy nihena, ny tanjany tsy niala taminy. 8Nisaona an'i Moizy telopolo andro tao amin'ny tany lemak'i Moaba ny zanak'Israely ka tapitra ny andro fitomaniana tamin'ny fisaonana an'i Moizy.
9Ary Josoe, zanak'i Nòna, dia feno ny fanahim-pahendrena, fa efa nametrahan'i Moizy tànana izy, ka nanoa azy ny zanak'Israely sy nanao araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
10Tsy nisy mpaminany nitsangana teo amin'Israely intsony sahala amin'i Moizy izay fantatry ny Tompo mifanatrika, 11na ny amin'ny famantarana amam-pahagagana nanirahan'ny Tompo azy tany Ejipta, hanaovany izany tamin'i Faraona sy ny mpanompony mbamin'ny taniny rehetra, 12na ny amin'ny tànany mahery rehetra aman-java-mahatahotra rehetra izay vitan'i Moizy teo imason'Israely rehetra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0488 seconds